Kusvirwa kwandakaitwa ndakabatiswa TUB! – Vanoda Zvinhu
Ndaiva ndakuvara nezemo umwe musi iri Thursday kubasa ndokutanga kutaurawo neimwe shamwari yangu pawhatsapp ndichitomuudzawo zvezemo rangu. Kuti ndiwane angandisvira kwainetsa sezvo mukomana wangu aiva achangondiramba saka ini ndaiva ndichida kufadzawo nyama dzangu semunhu aiva ajaira mboro.
Shamwari yangu akabva andi inviter kumba kwake kuti timbotandara zvedu nefriday yacho. The whole of Friday ndirikubasa takangoswera tichitaura zvinyadzi nekutumirana beche nemboro zvekutoti ndakaswera nezemo risingaite nekuti nyaya dzake dzaitonditotesa beche ndiri muoffice.
Ndakati ndachaisa akabva auya kuzonditora kubasa ndokuenda kumba kwake.Takasvika zvedu ndobva anyatsondibikira sadza neliver ndobva azondiisira mvura yekugeza. Ndakapinda zvangu ndokutanga kugeza but ndaiva ndisina kukiya door ndobva apinda mubathroom zvikanzi, “aahhh sorry ndanga ndichida kuona kuti waona sipo yekugezesa here.” Ndakabva ndatanga kunyara nyara ndichivhara beche nemazamu ne towel rangu iye ndokuramba akanditarisa.
Ndobva ndamuti, “aaaahhh Farie buda muno kani wakundipinzisa nechando wakavhura door,” apa ndichinyemwerera ndichimutarisa nekaziso kekuti huya,iye akabva afemerwawo ndobva andiswederera akanditsvoda pahuma akandibata muchiuno. Ipapo muviri wangu wese wakabva wadairira zvinoita munhu uya apindwa nekachando. Ndakabva ndatanga kumuswededzera kure ndichimuudza kuti ndaida kupedzisa kugeza. Muviri wangu wese waiva wakazara shower gel yake yandaishandisa ndobva atanga kundipurizira magaro achitora shower gel iya achiwedzera kundizora kumagaro. Apa ndakabva ndatanga kunzwa kunge beche rangu raifambwa fambwa netumasvosve asi ndikaita sendisina zvandiri kunzwa.
Akabva atanga kundimassager musana nemashoulders negel iya yakazara mumaoko. Akanditendeudza ndokuwedzera kundizora achindibata bata mazamu nedumbu. Handaiziva kuti kunhafiwa mazamu kunonakidza so kana muviri wakatota. Zvainyatsotekenyedza apa achinyatsotenderedza zvigunwe pamunyatso yangu. Apa ndaiva ndakungoita kasound kekuti mmmm nechekure zvangu coz zvaiwedzeresa beche rangu kuvhuta.
Muviri wangu wese raiva rangova furo. Apa zvangu ndaingoita sendino ignowa asi beche rangu raiva risisagoni nekuvhuta vhuta. Akazotanga kundidira mvura zvishoma nezvishoma kuti mafuro aya abve achiti paadira mvura otanga kundipurizira zvinyoro nyoro. Furo rapera akabva aswedera padhuze neni ndokutanga kundikissa muhuro achiita seanondinanzva muhuro macho akamira nechekuseri kwangu. Akatanga kundibata mazamu aya achibata ma t!ts angu achiita seanomatswinya apa ndaiva ndakungochemerera zvirikure.
Paaindibata mazamhu ndakabva ndasveverera mboro yake yaiva mubhurugwa ndichiibonyora zvishoma nezvishoma apa raiva ranyatsomira kuti ngiii. Ndakabva ndaswededza magaro angu pamboro yake iye aiva busy pamazamu angu. Akanditendeudza ndokutanga kundikisa pamuromo then i kissed him bek. Mmmm Farie ane malips anonaka wena. Aiita seanorumirira my lower lip ombotanga kutambisa rurimi rwake mumuromo mangu. Ini apa ndaiva ndongomubata magaro nnemusana wake iye maoko akaisa pamatits angu. Akabva aisa muromo wake on one of my boobs, mmmm handisati ndambonzwa muromo munodziya kudaro akomana. Apa manje akatanga kundisveta my tit sekacheche akatsinzinyira tumaziso ini ndakamubata musoro wake ndichinyatsomuswededza kuti anyatsosveta zamu racho. Ipapo akabva adzikisa ruoko rumwe achitekenyedza dumbu rangu ndokutanga kupuruzira pamusoro pebeche rangu which was clean shaven.
Paakangoribata ndakabva ndawedzera tumasounds tuya nekunakirwa ndobva achinja zamu rekuyamwa. Akabva atanga kundibata on matinji achiita seanondiwedzera kuvhura beche racho sezvo taiva takamira. Apa ndakabva ndasimudza gumbo racho ndikatsika pamusoro petub kuti anyatsobata yese. Ndakabva ndatanga kumubvisa belt ndokukumura bhurugwa rake rikadonhera pasi. Mmmm handisati ndamboona zvakadaro, mboro iyoyo yaiva nhema yakareba uye irihobvu sezvakaita ruoko rwemwana ane kana 7years. Ndakatanga kuibonyora zvishoma nezvishoma apa tichichikisana zvedu iye ndokuisa chigunwe chake one chepakati. Mmmm paakaisa chigunwe ndakamva ndatanga kuchemerera kuti ‘mmmm, aaaaa, yeeeees’ iye akaona kuti ndirikuzvifarira ndobva aisa chimwe chechitwo. Apa ndakabva ndabatirira musana weke coz paaitambisa beche rangu ndainyatsonzwa zvigunwe zvichiita sezvinodhonza zvimwe zvinhu zviri mukati mebeche.
Ndakabva ndatanga kuwedzera tumhere ndichimurumaruma mashoulders ake coz zvainyatsonaka. Akabva anditendeudza ndokundifongoresa ndikafunga kuti aida kundisvira hezvo kana. Akabva anyatsovhura pakati pemagaro ndokutanga kunanzva mukosho wangu achidzika kubeche rangu. Apa ndakawedzera kuchemerera nekuti ndaiva ndisati ndambozviitwa. Aiita sezvinoita imbwa inonazvwa mukaka kana sadza yainenge yaisirwa muplate. Ndakabva ndanzwa beche rangu rowedzera kutota. Akawedzera kundifongoresa achinanzva beche rangu apa akaisa chimwe chigunwe nechekumberi. Ndakanakirwa veduwe. Rumwe ruoko aitswinya my t!t apa ndaiva ndakuita sendinokoira zvishoma nekuti ndainakirwa. Akabva andigarisa patub manje ndokundivhura gumbo 180 ndokuisa musoro wake pakati pemakumbo angu. Both my legs aiva akatsika patub kuti anyatsovhurika sezviya zvinoita munhu anoda kuzvara. Akabva atanga kutenderedza rurimi mubeche rangu achiita seanorisvisvina achiridhonza dhonza. Apa ndaiva ndakungoti ‘farie,farie,farie f#ck me, I want u babe, pliz don’t stop’ haa chirungu chese ndakachitaura ipapo. Tisuka tinotaura chirungu kana tanakirwa. Akabva aisa zvigunwe 2 akatanga kundisvira nazvo. Akazvibudisa ndokudzosera futi muromo, aiti akarinanzva nanzva obva aita seairifuridza ndonzwa kamwe kamhepo so kainakidza.
Akatanga kundisvira nerurimi rwake apa ndaiva ndakunzwa kuti ndava kudenga chaiko. Aona kuti ndanzwa nekuda mboro akabva andifongoresa ndobva angoiti pfeeee mukati, hey ndakanzwa yese kupinda. Akambotanga kukoira zvishoma ini ndichidairirawo. Akatanga kuwedzera speed kuita semunhu ane shavi ndokutanga kundisvira manje. Asikana woye ndakasvirwa ndakabata patub. Apa aiva akabata mazamu angu achirova bhora mberi. Aiti akati koi koi koi koi koi ka5 obva aita zideep f#ck raisvika kuchibereko ndobva ndangoti aaaaaah Farie. Akaita saizvozvo for some time ndokuwedzeresa speed. Apa ndaiva ndanyatsosimudzira chiuno zvinoita kuti inyatsopinda yese ndichikoirawo with the rate he was f#cking me. Akabva abata chiuno changu achiwedzera kupinza zimboro rese zvekuti wainzwa jende richirovana nemhata apa ini ndaiva ndisisagoni nekunakirwa. Ndaiva ndongoti ‘babe babe babe, babe pliz don’t cuuuuum, babe I want to be your wife, babe pliz f#ck me everyday’ iye aingorovera mberi kunge asirikunzwa zvake.
Akabva azonyanyowedzera speed zvekuti ndakamira kukoira iye zvino iota sedhongi riri kusvira rimwe dhongi, ndakanzwa oti, ‘babe i love u, babe im cuuuumin, im cuuuuumin, im …..” Ndokubva atunda ipapo ini ndichitunda ndobva aramba akati ndiii mubeche rangu. Takabva tamboti mirei takadaro ini ndichiita kunzwa kupisa nekuvhuta kwebeche. Takabva tazotarisana ndobva atora towel ndokundipukuta pakati pemakumbo apa ndaiva ndakungonyaririra. Takabva tamira zvedu ndobva tambokisana kwekanguva akandisimudza ndokundiendesa mukitchen….where we had our second round.
Email Address	Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com
Takarepiwa nemabhinya, mukadzi wangu zvose neni
Poverty paHarare, ndodii?
Next story Kukwapura nyini yekashamwari kemwana wangu
Previous story Kukwirwa naStavo Benzi repamaShops!